Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry: Sady goavana no madinika ihany | NewsMada
Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry: Sady goavana no madinika ihany
Mahay miara-mientana ho azy ny vahoaka malagasy ! Herintaona lasa izay, dingan-dava no notanterahan’ny ekipam-pirenena Barea ary nifandanja tamin’izay ny fomba nanehoan’ny mponina ny hafaliany nentiny nihobiana ny maheriny. Samy gaga na ny mpitazana na ny mpandray anjara tamin’ilay fitosaky ny fanehoana hafaliana andro alina raha vao samy naheno ny vokatry ny fifaninanana afrikanina natao tany Egypta. Tsy nila mpanentana fa samy nitsangana nivoaka ny tranony tamin’ny andro avokoa ny rehetra, tanteraka ny fitenenana hafalina tsy omby tratra saingy ny trano no tsy omby ka nameno arabe ny fitobaky ny fifaliana. Toy izany koa nandritra ny fitsenana ny maherifon­tsika.
Marina fa tsy mbola ranomasina iny nanonja iny, nefa raha ny tazana dia tokony ho hain’ny olona hatrany ny firavoana arakaraka ny fisehoan’ny zava-mahafaly. Ny fifalina androany tsy vitan’ny hoe tsy ho sakana ho an’ny ampitso fa antoky ny fahatsiloan’ny sain’ny vahoaka mandanja ny fahasoavana miseho sady antoky ny fananany fo miara-mitempo. Iza no milaza fa tsy manana fahatsapana ny maha olom-pirenena izany ny Malagasy ? Zanak’omby tsy ampianarina milomano ! Ny antom-pifalina no tsy matetika ahafahany maneho izany.
Ny fiainana anefa moa tsy vitan’ny firavoravona lalandava. Eo ihany koa ny andro maizina. Malagasy ve no hatoro ny fisian’ny mangidy sy mangirifiry ? Andanin’ny mamy sy mangidy ary ny andro mamiratra sy manjobona, matetika mila tsy hisy fitsaharana, dia eo ny fitakian’ny adidy fanaovana ezaka. Manomboka eo dia lasa miditra amin’ny resaka mahatezitra, tsy ahitana ny atsy sy eroa rariny. Ny fiaretana ny fihafiana noho ny zava-misy ve azo lazaina ezaka ? Tsy ezaka ve no ataon’ireny olona mipatrapatraka atsembohana ireny na mpitarika sarety izany na mpamadika bainga amin’ny angady mondry izany sy ny sasany hafa tsy hotanisaina ?
Ny fandravonana ny tontolo mba hifanandrify ara-drariny ny ezaka sy ny tambiny no adidin’ny fitondrana, eo koa noho izany ny ezaka tsy namokatra hatramin’izay, mbola lavitry ny afo ny kitay. Firavoravoana moa no niantombohan’ny dinika kanjo tonga aty amin’ny resaka miteraka olana izay tsy ahitana famahana azy efa am-polo taona maro. Hany mety ho valin’izay angamba dia ny fizahana fomba fanatanterahana ny hevitra ho tonga asa.
Tsy ny fahavononana hiezaka no tsy misy fa ny asa mamokatra rariny no tsy ampy.